Teknụzụ ọhụrụ WPC plastik plastik, ụdị ala ọhụrụ na-ewu ewu na Europe na America anaghị egbochi mmiri, enweghị ọkụ ma na-eguzogide oke. Ala WPC na -enweghị mmerụ gburugburu ebe obibi, oyi akwa UV, na agba agba agba UV ga -eme ka nrụpụta nke ala dị elu, nkwụsi ike dị elu, nguzogide ntụpọ na ihe ndị ọzọ; akwa oyi akwa na-emetụta, na-emetụta isi nchekwa nchekwa nke ndụ ọrụ plastik, ọnụọgụ dị elu Igwe mkpuchi na-eguzogide nwere ike melite ndụ ọrụ nke ala;
Ime ụlọ WPC maka ime ụlọ ịsa ahụ
Ogwe ihe mejupụtara osisi-plastik bụ ụdị osisi (cellulose osisi, cellulose osisi) dị ka ihe bụ isi, ihe polymer thermoplastic (plastik) na ihe ndị na-enyere aka ịhazi ya, wdg. Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dị elu na ihe omume gburugburu ebe obibi, yana arụmọrụ na njiri mara osisi na plastik, bụ ihe ọhụrụ eji eme ọgbara ọhụrụ nwere ike dochie osisi na rọba. Mbelata bekee nke ihe eji emepụta osisi osisi bụ WPC.
LVT flooring PVC na-adụnye ọkụ Plastic Vinyl flooring
Dị mkpụmkpụ maka taịlị vinyl okomoko, emebere LVT iji mepụtaghachi ihe siri ike nke ala dị ka okwute ma ọ bụ osisi, mana na -enyekwa ọtụtụ uru ndị ọzọ bara uru. Dị na mbadamba ma ọ bụ taịl nile, LVT na -eji ihe nkiri mbipụta foto dị adị na akwa vinyl doro anya nke na -emepe echiche dị iche iche.
Ala PVC bụ ụdị ihe eji achọ mma nke eji eme ihe n'ọtụtụ mba n'ụwa niile taa. Ọ na-ewu ewu na ahịa Europe na America na ahịa Eshia-Pacific, ọ na-ewukwa ewu na China, atụmanya mmepe ya dịkwa obosara.